Mandrosoa Faravohitra : nesorina ny tranon-dopin’ny 4-mi | NewsMada
Mandrosoa Faravohitra : nesorina ny tranon-dopin’ny 4-mi
Niverenan’ny mpiasan’ny kaominina indray ny fanesorana ireo 4-mi manorim-ponenana teny Mandrosoa Ambohijatovo. Efa nisy ny fanalana azy ireo sy ny fanentanana natao, ny volana jolay teo, kanefa izao miverina eny izao ihany ny sasany.
Tsikaritra fa mbola nisy minia nanorina trano « sachet ». Ny sasany tamin’izy ireo, nanorina trano vy sy trano vita amin’ny fanitso. Natao tranon-dopy hofain’ireo mpaka mpivarotena hanaovana ny filan-dratsy mihitsy izany trano izany.
Tsy manana toeram-pivoahana ireo 4-mi manorim-ponenana etsy Ambohijatovo ireo. Mandoto ny tanàna sy ny manodidina azy izy ireo, araka izany. Lalam-bahoaka ihany koa ny toerana anorenany ka tsy manaraka ny lalàna.
Misy amin’izy ireo koa manao asa fanendahana ireo mpiandry taxi-be eny an-toerana ka miteraka tsy fandriampahalemana raha ny fanazavan’ny ao amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Hiverimberenana ny hetsika fanalana ireo 4-mi eny amin’ireo toerana maromaro eto Antananarivo. “Vao tsy andalovana ao anatin’ny iray volana monja ilay toerana efa iverenan’izy ireo”, hoy ny fanazavana.
Marihina fa misy ny ivontoerana efa natokana handraisana ireo 4-mi ireo toy ny eny amin’ny Ex Mad Cap sy ny Seba mba tsy hanorenan’izy ireo trano « sachet » etsy sy eroa. Anisan’ny fitaizana ireo olona ihany koa izao hetsika izao mba hanarahany ny fahaiza-miaina anaty fiarahamonina.
Afaka matory any amin’ireny toerana ireny ireo 4-mi tsy manan-kialofana. Afaka mitady vola kosa izy ireo amin’ny antoandro fa tsy mahazo manorim-ponenana etsy sy eroa.
Tsy hijanona hatreo ny hetsika fa mbola hitohy hatrany. Antananarivo madio sy milamina no tanjona.